သင့် HARD DRIVE ပေါ်တွင်စကားဝှက်ထားရန်ကဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
သင့် hard drive ပေါ်တွင်စကားဝှက်ထားရန်ကဘယ်လို
အခြေအနေကအခါတစ်ဦးကို USB flash drive ကိုကူးယူထားတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတစ်ခုခုနှင့်ကွန်ပျူတာ, ကံမကောင်း, များစွာသောအသုံးပြုသူများအကျွမ်းတဝင်ဧကန်အမှန်တစ်ခုအမှားထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးသို့မဟုတ်ပေးသည်။ အချိန်တစ်ဦးကအများကြီးသူတို့ကပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအဘို့အချည်းနှီးရှာဖွေရေးအတွက်သုံးဖြုန်း, ဒါပေမယ့်သူကပျက်ယွင်းနေ drive ကို, သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုချွတ်ရေးသားခြင်း, မဖြေရှင်းနိုင်ပါကထွက်လာခဲ့တယ်။ သို့သော်အများဆုံးဖြစ်ပွားမှု၌ဤအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ဖိုင်တွေကို USB အ flash drive ကိုကူးယူကြသည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ယင်းအကြောင်းရင်းများ
တစ်ဦးက USB flash drive ကိုဖိုင်ကိုကူးယူမရနိုငျသောအကြောင်းရင်းများအများအပြားဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်သူတို့ကိုဆနျးစစျကွပါစို့။
အကြောင်းပြချက် 1: flash drive ကိုပေါ်နေရာလွတ်၏မရှိခြင်း
ကနဦးထက်မှာအနည်းဆုံးအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာကွန်ပျူတာတစ်ခုအပေါ်ဒေတာသိုလှောင်မှု၏အခြေခံမူတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်နေသောလူများ, ဒီအခြေအနေကိုဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ခံရဖို့လည်းမူလတန်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံပေါ်ပေမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ့်ဖိုင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်များ၏အခြေခံသင်ယူဖို့စတင်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ပင်ဤကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြဿနာငုတ်နိုင်သူအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများရှိပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပံ့ပိုးပေးထားသည့်အချက်အလက်များကိုထိုသူတို့အဘို့သာရည်ရွယ်ပါသည်။
သငျသညျအလုံအလောက်အာကာသမဟုတ်သောအရာကို USB flash drive ကို, ဖိုင်များကိုကော်ပီကူးရန်ကြိုးစားသည့်အခါစနစ်မယ့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသ:
ဤသတင်းစကားကိုအများဆုံးသိကောင်းစရာများအမှားများ၏အကြောင်းရင်းညွှန်ပြနေသည်, ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူသာအပြည့်အဝ၌အပေါ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကို fit ဖို့ flash drive ကိုပေါ်နေရာလွတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ drive ကို size ကိုသင်ကကော်ပီကူးဖို့စီစဉ်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုထက်သေးငယ်သည့်အခါအခြေအနေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစျဆေးဖို့, စားပွဲပေါ်မှာ mode မှာက Windows Explorer ကိုဖွင့်လှစ်။ သူတို့ရဲ့စုစုပေါင်းနှင့်အတူအားလုံးအပိုင်း၏အတိုင်းအတာများနှင့်ကျန်ရှိသောနေရာလွတ်ရှိလိမ့်မည်။
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မီဒီယာအရွယ်အစားအလုံအလောက်မပါလျှင် - သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောက USB flash drive ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အကြောင်းမရှိ 2: အဆိုပါဖိုင်အရွယ်အစားမတိုက်ဆိုင် file system ကိုစွမ်းရည်
ဖိုင်စနစ်များနှင့်သူတို့ကိုအကြားခြားနားချက်များအသိပညာပါပြီအားလုံးမဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုတွေးမိ: သင်မှားယွင်းမှုတစ်ခုကော်ပီကူးတဲ့အခါ flash drive ကိုအပေါ်လိုအပ်သောအာကာသနှင့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်:
တစ်ခုကြိုးပမ်းမှု4GB ကိုထက်ကြီးမားသောက USB flash drive ကိုမှဖိုင်ကိုကူးယူတဲ့အခါဒီအမှားသာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက် drive ကို FAT32 အတွက်ချပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖိုင်စနစ်က Windows ရဲ့ဗားရှင်းအဟောင်းများတွင်အသုံးပြုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်လိုက်ဖက်တဲ့များအတွက်ကို flash card ကို format နဲ့ကဖြစ်ပါတယ်။ ကသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းသို့သော်အများဆုံးဖိုင်အရွယ်အစား -4GB အထိ။
သင်စပယ်ယာကနေ system ကိုသင့်ရဲ့ flash drive ကိုတွင်အသုံးပြုထားသောသောဖိုင်ကိုနိုင်ပါတယ်စစ်ဆေးပါ။ ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသည်:
တုတ်၏နာမကိုအပေါ်ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့ပြင်ရွေးချယ်ဖို့ drop-down menu မှာ "Properties ကို".
Properties window ကိုခုနှစ်တွင်ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ disk ပေါ်မှ file system ကိုအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးပါ။
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့, ကို USB flash drive ကို၎င်း NTFS file system ကိုအတူချပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကိုဘယ်လိုဖွင့်:
drop-down menu ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရွေးဖို့ကို right-click "Format ကို".
အဆိုပါ Format ကိုပြတင်းပေါက်မှာ NTFS file system ကိုအမျိုးအစားနှင့်စာနယ်ဇင်း install ဖို့ရှေးခယျြ "Start".
အသေးစိတ်: NTFS ဖို့ flash drive ကို format လုပ်အကြောင်းကိုအားလုံးသတင်းအချက်အလက်
အဆိုပါ flash drive ကို format ချပါလိမ့်မည်ပြီးတာနဲ့ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာကူးယူနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် 3: flash ကိုဖိုင်စနစ်၏သမာဓိနှင့်အတူအဆိုပါပြဿနာများ
မကြာခဏဖိုင်ကိုဖြုတ်မီဒီယာမှကူးယူခံရဖို့ငြင်းဆန်သောအကြောင်းပြချက်၎င်း၏ဖိုင်စနစ်အမှားများကိုစုဆောင်းနေကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်အများဆုံးမကြာခဏကွန်ပျူတာကနေ drive ကိုတစ်ဦးအချိန်မတန်မီဖယ်ရှားရေး, အာဏာကျရှုံးသို့မဟုတ်ပုံစံချပေးမပါဘဲရေရှည်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဤပြဿနာကိုစနစ်တကျနည်းလမ်းနိုင်ပါတယ်ဖြေရှင်းနိုင်။ : ဒီလိုလုပ်ဖို့
သိုလှောင်မှုဂုဏ်သတ္တိများဖို့လမ်းဖွင့်ယခင်အခန်းတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့နှင့် tab ကိုသွားပါ "ဝန်ဆောင်မှု"။ အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ် "file system ကိုအမှားအယွင်းများများအတွက် Disk ကို Check" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Check"
အသစ်ကပြတင်းပေါက်မှာ select လုပ်ပါ "ပြုပြင်ခြင်း Disk ကို"
အသုံးပြုသူကိုမတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိတဲ့ flash drive ကိုကိစ္စများတွင်, သင်ရုံက format နိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် 4: မီဒီယာရေးကာကွယ်ထားသည်
ဤပြဿနာကိုမကြာခဏတစ်ခု SD ကသို့မဟုတ် MicroSD အမျိုးအစား drives တွေကိုထံမှဖတ်နေဘို့ကဒ်စာဖတ်သူများနှင့်အတူလက်ပ်တော့သို့မဟုတ် Standard ကို PC ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေထဲကနေပေါ်ပေါက်။ Flash ကိုဒီအမျိုးအစား Drives အဖြစ်အချို့သောမော်ဒယ်များကို USB-drives တွေကိုအိမ်ရာအပေါ်အထူး switch ကိုမှတဆင့်သူတို့အပျေါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေးသော့ခတ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဖြုတ်မီဒီယာမှမှတ်တမ်းတင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းမခွဲခြားဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတည်ရှိသို့မဟုတ်မရှိမရှိ၏, Window ဆက်တင်တွင်ပိတ်နိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးက USB flash drive ကိုဖိုင်များကိုကော်ပီကူးရန်ကြိုးစားသည့်အခါမဆိုအမှု၌, အသုံးပြုသူစနစ်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်:
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့, သင်ချောင်းကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ် selector လီဗာရွှေ့, သို့မဟုတ် Windows setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအမှုစနစ်အားဖွငျ့သို့မဟုတ်အထူးအစီအစဉ်များအားဖွငျ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အသေးစိတ်: တစ် flash drive ကိုကနေရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဖယ်ရှားခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရေး၏နည်းလမ်းတွေကကူညီပေးခဲ့ဘဲ, ဆဲတစ်ဦးက USB flash drive ကိုဖြစ်နိုင်ဖိုင်များကိုမဟုတ်ကူးယူကြလျှင် - ထိုပြဿနာကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများ၏အမှားဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အထူးအစီအစဉ်များ၏အကူအညီဖြင့်အထူးကုလေယာဉ်တင်သင်္ဘော recover နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာဝန်ဆောင်မှုစင်တာ, ဆက်သွယ်အရှိဆုံးအကြံပြုလိုတယ်လိမ့်မည်။
ဗီဒီယို Watch: The mathematical secrets of Pascals triangle - Wajdi Mohamed Ratemi (သြဂုတ်လ 2019).